Madaxweyne Farmaajo oo maanta ubax dhigay taaladda SYL ee magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo maanta ubax dhigay taaladda SYL ee magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta ubax dhigay taallada SYL ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka socoto dabaal-dega 74-guuradii kasoo wareegatay xuska maalinta dhalinyarada SYL ee 15-ka May.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta socod ku maray wadadda hormarta xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana socodkiisa ku wehliya xubnaha golayaasha dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo mid mid u gacan qaaday dhallinyaradda Soomaaliyeed ayaa ugu hambalyeeyay munaasabadda 15-ka May, wuxuuna khudbad uu jeediyay ka sheekeeyay taariikhda dhallinyaradii Soomaaliyeed ee aas-aastay ururkii SYL oo uu tilmaamay inay dhaxal lama illaawaan ah nooga tageen.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay dhallinyarada Soomaaliyeed inay usoo jeestaan horumarinta dalkooda, isagoona kadib dib ugu laabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Dhinaca kale, xaflado kale oo lagu xusaayo munaasabadda maalinta 15-ka May ayaa haatan ka socota qeybo kale oo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana maanta la fasaxay dhammaan shaqaalaha dowladda Soomaaliya.